Ukuncancisa nokusebenzisa iziyobisi | La Leche League SA
UKUNCANCISA NOKUSEBENZISA IZIYOBISI
Ukuncancisa kuqinisekisa ukuba usana lwakho luba sempilweni, lukhula kwanye nengqondo yalo ikhula ngendlela eqhelekileyo. Ukuba usebenzisa iziyobisi okanye amayeza, kubalulekile ukwazi ukuba zingaluchaphazela njani ubisi lwakho okanye usana lwakho.
Oomama badla ngokuxelelwa ukuba abakwazi ukuncancisa ngoxa besela amayeza. Ngokomkhamo othile asiyonyani le yo, ibe ukuncancisa ubisi lwebhotile kuneengozi okunazo. Ngaphambi kokuba uyeke ukuncancisa, funa inkcazelo engakumbi ngokuqhagamshelana ne-La Leche League South Africa. Ungaphanda ngokukhuseleka kwamayeza ku-www.e-lactancia.org.
I-nicotine esegazini lakho yonyusa ingozi yokuba uyekise ukuncancisa ngaphambi kwexesha nokuba wenze ubisi oluncinci. Iintsana zabantu abatshayayo zisengozini engakumbi yokuba nomoya ohlabayo esuswini ne-SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
Ukuba awukwazi ukuyeka ukutshaya, kusakhuselekile ukuncancisa usana ibele kunokuluncancisa ubisi lwebhotile.
Nciphisa izinga otshaya ngalo uze utshaye xa uggiba kuncancisa kunokuba utshaye ngaphambi kokuncancisa.
Utywala buyakhawuleza ukuya egazini likamama naselubisini lwakhe, ibe kubakho imiphumo kubo bobabini umama nosana. Ukusela ngeloo xesha akuyongozi, ingakumbi ukuba usana lungaphezu kweeveki ezi-8 ibe luncanciswa emva kweeyure ezingaphezu kwezimbini usele. Ukubusela qho utywala kunokulwenza lukhale ngakumbi, lungancanci kangako, ibe lunokuchaphazela indlela ekhula ngayo ingqondo yosana lwakho. Ukusela kunokuchaphezela nendlela olukhathalela ngayo usana lwakho. Yazi uze uqaphele ukuba okukhona usela kakhulu, kokukhona kuthatha ixesha elingakumbi ukuba utywala buphele emzimbeni wakho.
Uninzi lwezi ziyobisi ziyaya ebisini lwebele ibe ziyityhefu kwiintsana. Umsi we-crack cocaine nawo uyingozi kusana lwakho. Oomama bafanele balinde ubuncinane iiyure eziyi-24 emva kokuba besebenzise i-cocaine okanye i-crack ngaphambi kokuba bancancise ibele.
Kukho uphononongo kodwa ambalwa angendlela intsango enichaphazela ngayo. Kungenzeka ukuba ingqondo yosana lwakho imoshakale kangangexesha elide. Emva kokuyisebenzisa kakhulu, iintsana ziba nentsango emizimbeni yazo kangangeeveki. Oomama abamele bayisebenzise intsango ngoxa bencancisa ibele.
Ukuba ukhona omnye umntu osebenzisa intsango ekhayeni lakho, umele ayenzele kude nosana lwakho.
I-METHAMPHETAMINE (TIK) NE-CRYSTAL METH
Ezi ziyobisi ziyakhobhokisa kakhulu ibe zisiya zisiba yingxaki kumazwe amaninzi. Akukho nkcazelo ininzi ngendlela i-tik echaphazela ngayo ukukhula nempilo yosana, kodwa siyazi ukuba inxulunyaniswa neengxaki zasekuhlaleni, ukuphathwa gadalala emakhaya namazinga aphantsi okuncancisa ibele.
Ukuba ungumama oncancisayo ibe uye wasebenzisa i-tik, ufanele ulinde ubincinane iiyure eziyi-48 ngaphambi kokuba uncancise kwakhona okanye de i-methamphetamine ingabonwa xa kuvavanywe umchamo. Ungakhabe ulikhama uze ulilahle ubisi lwakho ukuze uqhubeke ulwenza ubisi.